The Samsung Galaxy Note 20 uye iyo Galaxy Note 20 Ultra ndiwo mamwe emafoni emagetsi akasimba aunogona kutenga izvozvi. Mhedziso yeakanakisa emagetsi tekinoroji, iyo Galaxy Note 20 mireza kubva kuSamsung chimiro top-of-the-line Hardware. Unogona kuwana Samsung's Exynos 990 chip pazvikamu zvepasirese, nepo mamodheru eUS achishandiswa neQualcomm Snapdragon 865 Plus SoC - kunyangwe paine bakoat nemamodeli eUS.
Samsung Galaxy Cherechedzo Makumi makumi maviri ||| Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra Foramu
Kubata ndekwekuti pane kumwe kuganhurwa pakati pevatakuri veUS (modhi nhamba yakaguma ne U) uye mutakuri weUS akavhura akasiyana (modhi nhamba yakaguma ne U1). Zvimwe zvinotakura zvinhu zvakabikwa zvakadai seVhidhiyo pamusoro peLTE (ViLTE) uye Rich Communication Services (RCS) hazvigone kuwanikwa pane isina kuvhurwa Galaxy Note 20 modhi, kunyangwe mushure mekuisa mutakuri SIM. Sezvineiwo, hapana yemukati misiyano yemahara pakati pezvinhu zviviri izvi, zvinoreva kuti vashandisi vakatenga foni pazvitoro zvizere vari parumananzombe kune vashandisi vakasarudza kondirakiti inotakura.
Kana iwe ukanyatsotenga iyo yakavhurwa Cherechedzo 20 yeiyo inotakura-isina-isina ruzivo, saka iwe unenge uchifara kuziva kuti XDA Inozivikanwa Inogadzira warriorvibhu yakwanisa kumisikidza yemuno vhidhiyo kufona pamusoro peLTE, RCS, uye zvimwe zvinotakura maficha pane izvi zvakasiyana. Iyo yekuvandudza yaisawo pamwechete giraidhi yakajeka iyo inoshandisa i Google Runhare mbozha kuwana zvakavanzika IMS Zvirongwa uye wobva wabatidza paramita inodiwa.
Maitiro ekugonesa ViLTE uye RCS pane isina kuvhurwa Samsung Galaxy Note 20
Yambiro: Usasvibise nechero zvigadziriso pano zvausina kujairana nazvo, kana izvo zvisina kukurudzirwa mune ino gwara. Unogona kusangana nenyaya nekubatana kana ukatadza kuteerera yambiro iyi.
Dharirai uye isai iyo Google Runhare mbozha.
Vhura Google Runhare uye riite yako default Foni app.
dhayira *#*#467#*#* kuvhura IMS Zvirongwa.
Vimba pamusoro "IMS Service chinja". Wobva waita shuwa kuti "MMTEL switch" uye "RCS switch" zvinoitwa. Vhura yega yega-sarudzo yeMMTEL futi.
Dzokera ku main peji uye wobva wadzvanya pane "RCS Kugadziridza" marongero. Ita shuwa kuti sarudzo dzepashure dzakagadziriswa se "Nguva Dzose Batanidza".
(Inesarudzo) Iwe unogona ikozvino kushandura default foni app kubva kuGoogle Runhare kuenda kuScock's stock dialer.
Nakidzwa neViLTE uye RCS pane yako yakavhurwa Samsung Galaxy Note 20!
Ziva kuti yakasarudzika vhidhiyo yekufona sarudzo pane yemastock contacts app ichiri kunongedzera kuGoogle Duo. Iwe unofanirwa kugara uchisheedzera izwi kune waunosangana naye uye sarudza yemuno vhidhiyo yekufona icon kuti ushandise zvakanaka ViLTE. Uyezve, ungangoda bvisa maficha eGoogle Messages kuitira kuti uwane RCS inoshanda paSamsung Meseji.
The post Gonesa vhidhiyo pamusoro peLTE, RCS, uye zvimwe zvinotakura zvinhu kuUS kukiyinura Samsung Galaxy Note 20 yakatanga kutanga xda-vatadzi.